Koorasku wuxuu ka dhacaa gudaha Module 6 todobaad ah.
Cutubka kowaad wuxuu u go'ay koorsada buuggu. Saddex qaybood ayaa eegi doona qaabab kala duwan: albamka (ha ahaato carruurta ama dhalinyarada), sheeko-abuurka iyo sidoo kale buugaagta dhijitaalka ah. Cutubka ayaa ka hadli doona goobta daabacaadda, cutubka ugu dambeeyaa wuxuu diiradda saari doonaa sidii aad u ogaan lahayd fikradda khayaaliga ah ee ka baxsan buugga.
Waxa kale oo aanu nasiib u yeelanay in aanu soo dhawayno taxane marti ah: qaarkood waa xirfadleyaal goobta jooga, sida Michel Defourny oo siiya muuqaalo taxane ah xidhiidhka ka dhexeeya albamka, farshaxanka iyo naqshadaynta, qaar kalena waa khabiiro. MOOC waxa kale oo ay qani ku tahay tixanaha ay toogtaan xirfadlayaasha ganacsiga buuga: daabacayaasha, qorayaasha, buugaagta...
Qaybahani waxay isku daraan dhawr nooc oo hawlo ah:
- akhrinta shaqooyinka;
- ciyaaraha u fiirsashada,
- madal wada-tashi ah oo la isku kaalmeeyo oo aan si wada jir ah wax u baranno,...
Beri baa jiri jirtay suugaan carruureed Janaayo 9th, 2022Tranquillus
READ Daryeelka xoolaha beeraha
horeNabadda iyo amniga Afrikaanka ku hadla afka Faransiiska
socdaQarnigii 18-aad: dagaalka iftiinka